Dowlada Qadar Oo Somalia ku Wareejisay Gaadiid Loogu Talagalay Booliiska.(Sawirro) | Awdalmedia.com
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta dowlada Qadar kala wareegtay Gaadiid loogu tala galay Ciidanka booliiska Soomaaliya, waxaana gaadiidkan oo gaaraya ilaa 30-xabo nuuciisu yahay Landcroser .
Gaadiidkan ayaa Dowlada Qadar ugu tala gashay in ay ku howl galaan ciidanka booliiska , waxaana si rasmi ah gaadiidkan ula wareegay Wasiirka Amniga Gudaha Maxamed Abuukar Islow Ducaale kadib munaasabad kooban ka dhacday gudaha Dekadda Muqdisho.
Safiirka Qadar u fadhiya Soomaaliya Xasan Bin Xamsa ayaa gaadiidkan ku wareejiyay Wasiirka Amniga Gudaha, waxa uuna Safiirka sheegay in gaadiidkan ugu tala galeen ciidanka booliiska Soomaaliya.
Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa dowladda Qadar uga mahadceliyay dowrka ay ku leedahay Taageerida dowladda Soomaaliya iyo Shacabkeeda.
Dowlada Qadar oo Saaxiib dhaw la ah Madaxda dowlada Soomaaliya ayaa u muuqata mid xoojineysa taageerada ay siineyso Soomaaliya, waxa ayna Qadar dhawaan balan qaaday fulinta Mashaariic horumarineed oo dalka laga fulinayo.